Sary 15 izay mampiseho ny marina ao ambadiky ny sary | Famoronana an-tserasera
Sary 15 mampiseho ny marina ao ambadiky ny sary
Ny zava-kanton'ny fakana sary dia voajanahariny. Nisy sary izay nijanona ho mandrakizay voasokitra tao amin'ny fitadidian'ny olona an-tapitrisany, sahala amin'ny nandefasan'izy ireo lahateny manerantany izay azon'ny tsirairay atao ny mahatakatra sy manome lanja. Na eo aza izany, ao ambadik'io sary io izay mangalatra ny fotoanantsika ary mandray ny saintsika, misy fizotry ny famoronana miafina na farafahakeliny tsy hitan'ny besinimaro. Misy fotoana, fotoana tsy fahita firy eny, izay sary nalaina sary tsy nahy na tsy iharan'ny tetika famoronana kasaina natao teo aloha. Ambonin'izany rehetra izany, rehefa miresaka momba ny sary fanadihadiana na fanaovana gazety (izay voarara tanteraka ny fanodikodinana ny zava-misy voasambotra), ireo sary izay teo alohanay dia nandalo sivana vitsivitsy na nahazo fanovana tena vitsy. Fa ny marina dia ny ankamaroan'ny sary matihanina mazàna dia manana paikadim-pananganana. Eo amin'ny tontolon'ny dokam-barotra sy ny zavakanto, ny dingan'ny drafitra ary vokatr'izany dia lasa manan-danja tokoa ny famolavolana hevitra.
Talohan'izay, ny fiatraikany izay tsy maintsy ao anatin'ny sary nozaraina sy noforonina dia hosaintsainina amin'ny antsipiriany. Izy ireo dia tsy maintsy misy karazana zava-misy mifanitsy afaka miteny irery sy mamoaka kabary mazava sy mazava azo avy amin'ny fiteny hita maso. Androany isika dia hahita ny "ambadiky ny" sary marobe izay mahasarika tsotra fotsiny, ary angamba rehefa nahita ny fizotrany dia tonga sary izy ireo vao mainka mahasarika. Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Sary 15 mampiseho ny marina ao ambadiky ny sary
Misaotra nizara an'ity fitaovana ity! Tiako izany, tiako ny sary sy ny endrika sary ary ny tena manintona ahy indrindra dia ny fanovana sary.
Mamaly an'i alicia
eleazar martinez dia hoy izy:
Miavaka. MAGIC, ARTIKELY SY SITRITIVITSY ny ART .-
Mamaly an'i Eleazara martinez
Mahaliana izany, ary milaza an'izany aho, fa ny fahaiza-mamorona ary heveriko fa misy ihany koa ao Venezoela, ny tanana majika, amin'ny alàlan'ny sary tsara, dia hampivondrona ireo tsy fitoviana ao anaty endrika tena mamorona.
Miarahaba anao amin'ny fankasitrahana aho.
Ny Horoscope ho an'ny mpamorona sary - Hehy
Zokiolona, ​​ny mombamomba ny mpamorona: Junior, Semi Senior ary Senior